Andro iraisam-pirenena ho an'ny zokiolona | Primature
Lapan’i Mahazoarivo, ny 04 oktobra 2021 – Araka ny toromarika avy amin’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara dia notanterahina androany tao amin’ny kianja mitafon’ny tananan’i Toliara, Faritra Atsimo Andrefana, ny fankalazàna ny andro iraisam-pirenena ho an’ny zokiolona, ka nitarika ny fitondram-panjakàna tamin’ny lanonana fanokafana an’izany fotoana izany ny Praiminisitra Ntsay Christian. « Tsy vanim-potoana hanilihana ny zokiolona ny fahanterana » : io no lohahevitra nentina nanamarihana ny fankalazàna, ary ankoatra ireo tompon’andraikitra miasa any anivon’ny Faritra, sy ny vahoaka tomefy, dia mpikambana maromaro ao amin’ny governemanta no tonga nanome voninahitra ny fotoana.
Tsy fankalazàna fotsiny ihany ny androany, hoy ny Lehiben’ny governemanta, fa fotoana amaritana ny fanomezam-boninahitra sy hasina ho an’ireo raiamandreny lolohavina an-tampon’ny loha ; ary anaovana jery todika ny lasa sy iheverana ny ho avy momba azy ireo, satria napetraky ny Filohan’ny Repoblika mazava fa tsy maintsy omena ny toerana sy ny haja ary ny hasiny eto amin’ny tany sy ny fanjakàna ny zokiolona.
Noresahina foana teo aloha ny mahakasika ny hasin’ny zokiolona, hoy ihany ny Praiminisitra, fa ankehitriny kosa dia marihina amin’ny fanoritana azy ao anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakàna izany, ka hotanterahina amin’ny alalan’ny fametrahana rafitra sy ny fanorenana ivon-toerana hanomezana tosika ho an’ireo zokiolona, ary izany dia manerana ny Faritra telo amby roapolo.
Nampahafantariny ihany koa fa tsy ho ela intsony dia haroso eny amin’ireo antenimiera roa tonta ny lalàna vaovao hanomezan-danja sy hametrahana ny hasin’ny zokiolona, izay zo tokony hositrahin’izy ireo, ary tafiditra rahateo ao anatin’ny fivoarana miainga avy eny ifotony, sy hanajàna ihany koa ny soatoavina Malagasy, hoy fanazavana nentiny.
Nomarihin’ny Praiminisitra nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony fa zava-dehibe ny fahitàna ny fiverenan’ny firaisan-tsaina eo amin’ny samy zanaky ny Faritra Atsimo Andrefana ankehitriny : « mahavelom-panantenana tokoa satria ianareo aty ifotony no mahatsapa fa mila firaisan-kina, mila fifankatiavana, mila firaisam-po, mila fifamenoana amin’izany zotram-pampandrosoana ny firenena izany » mba hahafahana manatanteraka ny asa sy vavan’asa maro hampandrosoana ny Faritra.
Nitondran’ny Lehiben’ny governemanta teny ny amin’ireo fangatahana maro samihafa entin’ny solombavambahoaka sy ny tompon’andraikitra hafa, amin’ny anaran’ny vahoaka. Notsiahiviny fa mijery sy mamakafaka ny zava-misy ny fitondram-panjakàna, ka nanome toky ny tenany fa hodinihina ao anatin’ny fotoana fohy ny hetaheta rehetra notaterina, ary homena valin-teny aorinan’izany.
Nohamafisin’ny Praiminisitra manokana anefa fa ao anaty fitoniana sy filaminana ihany no ahafahan’ny fitondram-panjakàna mamaha ny olana rehetra miseho. Teo indrindra no nanasongadinany ny tombony amin’ny fisitrahan’ny vahoaka an’ireo fotodrafitrasa maro dia maro nanaovan’ny fitondràna ezaka hatrizay : « mila an’izany i Madagasikara, izany no hambom-pon’ny Malagasy, ary izany no tsy maintsy hametrahantsika zavatra soa sy meva ho an’ny taranaka faramandimby », hoy ihany ny tenany. Manoloana izany rehetra izany anefa dia notsiahiviny fa laharam-pahamehana hatrany ny sosialim-bahoaka sy ny fanaraha-maso ny vidim-piainana amin’ny ankapobeny, indrindra ny fanampiana an’ireo vahoaka tena marefo, ary iaraha-manohy ny ady amin’ireo fomba tsy mety toy ny fanodikodinana sy kolikoly amin’ny endriny isan-karazany.
Noraisin’ny Praiminisitra indray mandeha, ho famintinana teo am-pamaranana, ny resaka soatoavina, dia ny fifankatiavana, ny fifamenoana, ary ny fijerena ny maha-olona ; ka nanambaràny fa mifanome tanana amin’ny vahoaka ny fitondram-panjakana, ary dia nanolotra fisaorana feno ho an’ireo Malagasy mpiray tanindrazana monina any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana ny tenany.
← Fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Faritra
Fiahiana ara-tsosialy : fametrahana ny « Toseke Vonje Aigne » tao amin’ny distrikan’i Bekily →